Umthombo wokuKhanya okuKhanyayo okuKhanyayo okuKhanyayo okuKhanya ngokuKhanya ngokuKhanya okuPhandle kwe-FT Series 1018, China Umthombo ogcweleyo wokuKhanya kweSibane seCob ye-Underground Light FT Series 1018 abavelisi, abaxhasi, abaFektri -FETON CORPORATION Co., Ltd
Umbala okhuphayo: Umhlophe oshushu / oMhlophe ongathath 'icala
Izinto ezisisiseko: I-ceramic eqhelekileyo
I-CRI: I-Ra95 yesiqhelo, eyi-98,99 eyenziwe ngokwezifiso
Amandla akhoyo: 20w, 30w, 40w, 50w
Package Iphakheji ye-ceramic ye-SMT enedama lobhedu, ibonelela ngombala obanzi.
◆ Ukukhanya kwesibane esikufutshane nelanga kunye notshintsho kubungakanani obukhazimlayo ngokusekwe kwindawo, umhla kunye nexesha.
Umboniso we-Universal, kubandakanya i-UVA kunye nezibane ezibomvu kakhulu.
Ikwanayo ne-CRI ephezulu kakhulu (i-CRI> 97).
Uluhlu oluphezulu lwe-Corrosion RobustnessUluhlu olubanzi lokuhamba okukhanyayo kunye nokusebenza okuphezulu.
Friendly Indalo-enobuntu, ubomi obude kunye nokuthembeka okuphezulu.
(1) Ukukhanya kwexesha elide kunye nemeko zokhathalelo lwempilo
(2) Imeko ezichanekileyo zokunciphisa umbala
(3) Izitudiyo ze-HD kunye nezibane ezizodwa
Umthombo wokukhanya kwe-1 ufezekisa ukubonwa okupheleleyo kunye nomgangatho ophezulu wokukhanya okumhlophe kwindawo enye yokupakisha ye-SMD, ethi ingumthombo wokukhanya ogqibeleleyo wokukhanya kunye nomthombo wokukhanya wokuhombisa wokukhanya onombala ophezulu wokuvelisa kwakhona.
2.Ukupakisha okukodwa kwendalo ye-LED yethu kwenza lula ukuyila kunye nophuhliso lwesikhanyiso, ukunciphisa umjikelo wophuhliso kunye nexesha lokuvelisa kunye nokunciphisa iindleko.
I-3.Ngempumelelo yokunciphisa ukunganyangeki kwe-thermal kakhulu, umthombo wethu wokukhanya wenza ezinye iinketho zokutshatisa uyilo lweemveliso zesikhanyiso kunye nokusebenza ngokugqibeleleyo, iindleko ezifanelekileyo, ubungakanani be-lumen ephezulu, njl.